IPhone 7 Jet Nhema kana iPhone 7 Nhema? Ndiwo mubvunzo | IPhone nhau
IPhone 7 Jet Nhema kana iPhone 7 Nhema? Ndiwo mubvunzo
Vakataura, vakataura, uye havana kumira kutaura nezveruvara rutsva rwaizounzwa naApple kune huwandu hwayo hwemafoni. Zvakawanda zvakahwa nezveruvara rwebhuruu, zvisinei, Apple yakaguma ichisarudza "Jet Nhema", iyo muApple Store Online muSpain yakashandura se "inopenya nhema" (tinosiya Jet Nhema inoyevedza). Nekudaro, uyu muto mutsva wakagadzira dambudziko pakati pevatengi venguva yemberi yeiyo iPhone 7 nekuda kwerudzi rwayo rwepasi, uye kuti mutsauko wacho uri pamusoro pekujeka. Zviripachena kuti iyo nyowani iPhone 7 Jet Nhema ichaenda kunokwezva yakawanda inotaridzika, asi iPhone 7 Jet Nhema kana iPhone 7 Nhema? Ndiwo mubvunzo kana uchitenga. Isu tinokuratidza mamwe mafoto ekutanga kuti iwe uone mutsauko chaiwo.
Uye ndezvekuti iko kupa kwecomputer uko Apple inotipa muApple Online Chitoro kunonakidza, asi isu tatoziva kuti zvese izvo zvinopenya hazvisi goridhe, uye tinoda kuona kuti iPhone 7 Jet Nhema yakaita sei munzvimbo ine hushamwari chaiyo . Kune izvo, uye kuvonga kune vakomana kubva RedmondPie, tinokuunzira iyi mhenyu mifananidzo yeiyo iPhone 7 Jet Nhema uye kuenzanisa kwayo neiyo iPhone 7 Nhema kuti iwe ugone kukoshesa misiyano chaiyo. Inopenya kwazvo, pamwe inopenya.
Ichokwadi ndechekuti mukushayikwa kwekupenya kusingadzorwe, zvingave zvakaoma kuvasiyanisa neziso rakashama, zvisinei, isu tinongoda kufamba-famba pachigadzirwa kuti tione yakanaka patent yeganda iyo iyo iPhone 7 Jet Nhema inotaridzika, chimwe chinhu. izvo pasina mubvunzo zvinoriita chinhu chemeso ese. Asi ino haisi nguva yekuzvidza iyo iPhone 7 Nhema, pakupedzisira matte nhema chishandiso, mushure mekureba kwenguva refu uchizungunuka neSpacial Grey, ruvara rwusina kunyatsogutsa zvakanyanya purist, sezvo yaive hafu pakati pesirivheri neyechitema. Zvisinei, wave uchikwanisa kuzvisarudzira neaya mafoto echisikigo. Usakanganwa kana, kuti iyo iPhone 7 Jet Nhema ine akawanda mavhoti kutambura micro-abrasions Nekuda kwehunhu hwakaomarara hwechinhu, panogona kuve nekukwaya kwakawanda kana kurasikirwa kweruvara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » IPhone 7 Jet Nhema kana iPhone 7 Nhema? Ndiwo mubvunzo
Miguel Angel Castrejon akadaro
Handizive kana ndiri ini, asi kunyange chinonyanya kunetsa nezveJet nhema ndechekuti inokwenya zviri nyore; Uye mumifananidzo iyi zvinoita sekunge muchikamu chezasi cheJet Nhema izvi zvatosimbiswa, ndinodzokorora, handizive kana ndiri ini kana kutora mifananidzo, asi ndingashinga kuvimbisa kuti kana ari makwikwi
Pindura Miguel Angel Castrejon
Mr_edd hernandez akadaro
Iyo nhema inotonhorera sezvo iyo iPhone 56 iyo yakawedzera nzvimbo grey »ndanga ndichirota yevatema iPhone iyo 5 yaive inenge nhema handipedzisi iyi nyowani nhema kana ndichiida, sezvo jetblack, sekutaura kweApple pachayo, iri nyore kutambura kukwenya kuri nyore kudaro, ramba uchiwana iwo matte matema pa iPhone izvo zvichave zvechokwadi yangu inotevera kutora
Pindura Mr_edd hernandez
Edgar Moreno. akadaro
Kwete, kwete kuita jetblack izvozvi, kubva pano ini ndinoona kuti ichave isina kusimba uye inokasira kukwenya.
Pindura kuna Edgar Moreno (@Emorenoc)
Zvakanaka, vanhu havana kubvarura mbatya dzavo ne3G uye 3Gs zvakare, zvinofanirwa kuyeukwa kuti raive iro vara, asi mupurasitiki.
Ini handifunge kuti pane dambudziko hombe, ndinofungidzira kuti zvinoitika senge 5 uye kurasikirwa kwayo kweruvara.
Ndine mashanu kubvira 5, chifukidziro uye hapana kana kukwenya, ndinochishandisa ndisina chifukidzo zvakanyanya uye kusvika zvino chasara, mubvunzo? Iishandise nehanya, huya iyo jet nhema pasina kupokana.
Samuel Afonso Matos akadaro
Zvakanaka, ndinoda "matte" mutema zvirinani, chaizvo. Iyo Jet Nhema yakanaka nenzira imwecheteyo, asi ini ndinofarira iwo musiyano wemavara zvirinani uye kuti hauunze kupenya kupfuura zvakajairika dema modhi.
Pindura kuna Samuel Afonso Matos
Ini ndatora matte matema, iyo inopenya nhema inowanzo tenderera kukwenya uye kana maoko ako achidikitira kubva pakuve nayo gumi kana gumi nemashanu maminetsi muruoko rwako unofanirwa kupa zvishoma yekuchenesa chokwadi, pamusoro zvinondiyeuchidza maChinese huwandu hweAliExpress, muchidimbu ndakachengeta matte nhema Plus uye inosvika pane iyo 10.
Ndeipi matte nhema? Ichiri chena, chakasviba asi chena mushure mezvose.
Yakasviba, kwete grey
Asi zvinoita kunge grey rakasviba
Kwete, Apple ichibvisa odhiyo jack kubva ku iPhone hakuna mutambo
Ireland inopindura European Commission kuti: "Apple haina chikwereti kwatiri"